Diovina amin'ny melon ho an'ny fahaverezan'ny lanja - sakafo
Diovina amin'ny melon - safidy tsara indrindra
Amin'ny fiafaran'ny fahavaratra, ny voankazo miandry efa nandrasana ela dia faly aminay isan'andro. Ity no fotoana mahomby indrindra hanaovana ny mombamomba anao, satria ny zavatra mety ho matsiro kokoa noho ny sakafo amin'ny melon. Ny nofo mangatsiatsiaka sy malefaka, izay mamorona ny foto-tsakafo, dia tsy mamonjy anao fotsiny amin'ny pistes sy ny lavany eo amin'ny felatanana, fa manetona ny vatana amin'ny vitamina, mitaky hery tsara ary manome fihetseham-po tsara.
Benefits amin'ny melon rehefa very maina
Ny famerenana ny vola fanampiny vitsivitsy tsy manimba ny fahasalamana, ny sakafo dia tokony ho voalanjalanja sy mahomby amin'ny ady atao amin'ny tavy. Moa ve ny fihinana melon dia mamaly ireo fepetra takiana rehetra ireo ary ny melon ilaina amin'ny fahazoana mavesatra? Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo, dia mila mahafantatra ireo toetra tsara rehetra avy amin'io voankazo io ianao.
Melon dia mandray anjara mavitrika amin'ny fikolokoloana ny cholesterol sy ny tavy matavy ary ny fanesorana azy avy eo amin'ny vatany, izay tena mahakasika indrindra ny toetry ny fanaka.
Tsy ampiasain'ny alikaola matetika ny fampisehoana ny tsindrin-tsakafo, satria ny pulpany dia mampirisika ny famoahana ary manampy amin'ny fikarakarana sakafo matavy sy mavesatra.
Manampy amin'ny fampihenana ny lanjany koa i Melon noho ny fiantraikany amin'ny dibera, izay manampy amin'ny fiatrehana ny fanaintainana, hanesorana ny vombon'ny fibobohan-tohatra amin'ny vatana ary mifanaraka amin'izany dia manana fiantraikany mahasalama amin'ny rafitra fitsaboana.
Anisan'ny toetra mahasoa ao amin'ilay melon dia lanjany be dia be.
Ankoatra izany, ny melon dia manameloka, manome hery, manatsara ny tonony ary manentana ny famokarana sela vaovao.
Melon dia manana firavaka vitamin-mineraly manankarena, izay tena manan-danja tokoa amin'ny sakafo ara-tsakafo .
Sakafo avy amin'ny melon ho an'ny fatiantoka
Raha te handany ny lanjany miaraka amin'ny fanampian'ny melon ianao ary hahatratra ny vokatra tadiavinao, tokony hanaraka ny fepetra ara-tsakafo sasany ianao:
Ny fampiasana ho an'ny sakafo dia tokony ho tsara tarehy sy dibera ihany, ka ny safidin'ny voankazo dia tokony hanatona tompon'andraikitra.
Ny voankazo voankazo voankazo dia mety hahatratra hatramin'ny 7.5% amin'ny siramamy, izay mahatonga ity rafitra matsiro mahafinaritra tsy azo ampiasaina amin'ny diabeta.
Ny sakafo amin'ny melon dia manery ny hihinana an'io legioma mamy io ho toy ny sakafo misaraka, na antsasak'adiny aorian'ny sakafo, tsy mampifangaro azy amin'ny vokatra hafa amin'ny sakafo sakafo.
Tsy ilaina ny mihinana melon iray aorian'ny 20.00 sy mba hampihenana ny fihinana ranon-tantely mandritra ny herinandro.
Melon sakafo ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana - sakafo
Monodiet, izay nasongadina melon iray, dia manampy amin'ny fampihenana ny lanjany hatramin'ny 3,5 kg amin'ny 3 andro. Ny vokatra dia mendrika. Ny sakafo amin'ny sakafo toy izany no tsotra indrindra:
Ho an'ny andro iray dia tokony hihinana manodidina ny 1,5 kg ny pulp.
Ny isan'ny sakafo isanisany dia tsy maintsy farafahakeliny dimy.
Amin'io andro io dia avela hisotro rano tsy misy gazy, dite maitso mavokely ary fofona misy ravina avo.
Ny fahaverezan'ny fatim-bolo amin'ny melon dia tsy omena mihoatra noho ny telo andro. Na dia izany aza, ireo izay te-hanaisotra lanjany bebe kokoa, dia asaina manohy ny andro fahefatra mba hihinana ny sakafo ara-tsakafo mandritra ny herinandro, saingy efa miely bebe kokoa ny votoatiny. Ohatra, safidy tsara iray - sakafo amin'ny melon sy pastè.
Ny ramanavy sy ny dibera ho an'ny fahavoazana
Betsaka ny fanadihadihana mendrika dia mendrika ny pastèque sy ny dibera, izay, raha hitany, dia mety hahavery hatramin'ny 6 kg mandritra ny fito andro. Ny vokatr'io fihinanana io dia mifandray bebe kokoa amin'ny vokatra dièraika amin'ny vokatra fototra, mba tsy hisian'ny fitempon'ny rano dia mila mitandrina ny fitondran'ny rano. Menatra miisa ho an'ny sakafo maraina melon-kovety:
Ny sakafom -bozaka: tsy matavy tsy misy fery miaraka amin'ny siramamy 50-70 g, mofo (2 p.) Ary 200 g ny pulp sy kavina melon, na 100 g ny voankazo tsirairay.
Snack : trondro voankazo (150 g), salope salope (100 g), tsaramaso sasao (50 g), ravina salady (100 g) ary yoghurt klasika 0% ary 1 tbsp. siramamy. Kaopy dite maitso .
Sakafo : 300 g of célèbre célèbre.
Dinner : salady vaovao voatabiha sy cucumbers (150 g), vary maitso (120 g), voankazo melon (200 g).
Sakafo amin'ny melon sy yogurt
Ny fanadiovana ny tsinahy dia tsy maintsy atao tsy tapaka. Ho an'ireny tanjona ireny, dia novolavolaina ny sefom-kafe fito andro nahaterahana. Ary melon mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra toy izany dia ny orinasa tsara indrindra ho an'ny vokatra azo avy amin'ny ronono maina. Ity fitrandrahana tsy misy entana ity dia ahafahanao manala kilao 5 fanampiny. Io fihinanana io dia mora mora ny mandefitra, ary mandray soa avy amin'ny sakafo isan-kerinandro toy izao ny vatany:
Fiatoana : 400 g ho an'ny melon pulp.
Snack : 1 cup tsy dia matavy kefir. Azonao ampidirina amina volkano na siramamy ho an'ny tsiro.
Sakafo : Sakafo maimaim-poana (200 g), kafe dite maitso ary 400 g melon.
Snack : dite maitso miaraka amin'ny mofo sy ny sakafom- piaramanidina .
Andraikitra : Trouska boasary na boaty (200 g), salady legioma (ampahany 1), dite maitso (kaopy 1).
Smoothies of melon ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana
Afaka mandany lanja amin'ny melon ianao ary miaraka amin'ny fanampiana ny fofona malefaka, izay mety hitondra anao ho toy ny sakafonao. Tena tsotra ny fisorohana ny fisotroana toy izany.
nofo voankazo - 200 g;
citrone and salmon with ¼ fruit;
ravina voankazo hafakely - 10 g.
Tokony ho mangatsiaka ny singa rehetra amin'ny fofona, noho izany alohan'ny hanomanana ny zava-pisotro dia mila diovina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny ora roa.
Avy amin'ny lemaka sy lime no manosihosy ny sira, ampiasao izany ao anaty vilia baolina misy kobam-bary madinika.
Maniraka ravina ravina isika, manasa sy mangatsiaka, ao anaty fitoeran-drano ary mangeja ny entana rehetra mandritra ny 1 minitra farafahakeliny.
Ny fanatanjahan-tena mivonona dia napetraka ao anaty vera na tavoahangy iray, raha ilaina, manampy tafio-dronono ho an'ny zava-pisotro isika, ary voampanga amin'ny tanjaky ny voankazo mandritra ny andro.
Melon Diet - Results
Melon sy lozam-pifamoivoizana dia mifanentana tsara mifanaraka tsara. Ny sakafo amin'ny melon ny vokatra dia mahagaga. Raha manaraka tsara ny fepetra voalazan'ny sakafo sy sakafo ianao, dia ho hita ao anatin'ny iray andro ny valiny. Ny zana-tsipìkan'ny maingoka hivezivezy, ny fahasalamana sy ny fanarenana angovo dia ho eo an-tampony, ary ny tena zava-dehibe, tsy hisy ny hanoanana sy ny fahaketrahana izay miaraka amin'ny sakafo maro.
Diet for 1000 calories
Sakafo ho an'ny fery maloto avy amin'ny fiterahana sy ny fiterahana
Sakafo mahomby mandritra ny 5 andro
Monodiety nandritra ny 10 andro
Sakafo ho an'ny hepatita C
Diovina amin'ny buckwheat - recipe
Andro iraisam-pirenena ho an'ireo havia havia
Ahoana ny fomba fametahana kiraro?
Nanomana hena i Solyanka
Ny fototry ny elecampane dia toetra mahasoa sy fanoherana
Navoaka tany Cannes i Vincent Vincent Kassel raha tsy teo izy
Azo atao ve ny matory ao anaty lantia?
Ny hetsika dia manatona eo amin'ny psikology
Fanambadiana am-pitiavana ho an'ny olombelona
Afaka mahazo maotera ve aho amin'ny vehivavy bevohoka?
Repoblika Tseky - fiarovana
Gel Maniry amin'ny harona - fampiharana
Cocktail of yoghurt